တစ်ဦးကအံ့သြစရာစစ်တမ်းကို Android ပေါ်မှာရိုးရှင်းလက်နှိပ်ဓာတ်မီး app များကိုခွင့်ပြုချက် 77 မေးရန်ဖော်ပြသည် - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » စီးပွားရေး "တစ်ဦးကအံ့သြစရာစစ်တမ်းကို Android ပေါ်မှာရိုးရှင်းလက်နှိပ်ဓာတ်မီး app များကိုခွင့်ပြုချက် 77 မေးရန်ဖော်ပြသည် - BGR
တစ်ဦးကအံ့သြစရာစစ်တမ်းကို Android ပေါ်မှာရိုးရှင်းလက်နှိပ်ဓာတ်မီး app များကိုခွင့်ပြုချက် 77 မေးရန်ဖော်ပြသည် - BGR
တစ်ဦးလက်နှိပ်ဓာတ်မီးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုယခုနောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းများနှင့်အတူပေါင်းစည်းသော်လည်းသင်သည်တာရှည်အလုံအလောက်ရှာဖွေမှုကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, သင်တို့ကိုဆဲ Google မှာလက်နှိပ်ဓာတ်မီး apps များရာပေါင်းများစွာ Store မှာ Play ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ တူသော Apps ကပ ultra အရောင်ဖလက်ရှမီး ဖလက်ရှမီးပို LED ဖလက်ရှမီးတောက်ပ - Multi Mode ကို LED ကများနှင့်အရေးပေါ် mode ကို et လက်နှိပ်ဓာတ်မီး mode ကိုအရေးပေါ်ပျော်စရာ & Multi နဲ့ LED - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘုံအမှုအရာရှိအားလုံးအရာ၏။
ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာဤရက်သတ္တပတ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတဲ့ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း avast! ဝှက် ထောက်လှမ်းရေးခြိမ်းခြောက်ဤ application များအားလုံးအတွေ့အကြုံရှိကအနည်းဆုံး 100 000 downloads, ။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်ဖြစ်ပါသည် ဖလက်ရှမီးပို သောဘလော့ဂ်အချက်အလက်များအရသိရသည်တစ်ဦးသန်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤအချက်ကို, သို့သော်, ပိုပြီးစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါသည်: များလွန်းခွင့်ပြုချက်ဖြစ်ဟန်အရာတစ်ခုချင်းစီကိုလျှောက်လွှာ။ 77 တိုင်အောင်, အတိအကျဖြစ်ဖို့။
ဒီအခွင့်ထူးဆန်းတဲ့ပုံရသည်? အသုံးပြုသူတစ်ဦး, etc ဖို့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးစေခြင်းငှါ, တစ်ဦးလက်နှိပ်ဓာတ်မီး: ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, တစ်ဦးလက်နှိပ်ဓာတ်မီး application ကိုတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲကန့်သတ်ရည်မှန်းချက်ရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။
ဆက်ဆက်အခြို့သောမျက်ခုံးမြှင့်ကြောင်း 937 လက်နှိပ်ဓာတ်မီး applications များစုစုပေါင်းထံမှခွင့်ပြုချက် application များအတွက်တောင်းဆိုမှုများ၏အကျဉ်းချုပ်သဘောသဘာသို့နက်ရှိုင်းသောဘလော့ဂ် Avast ။ တဦးတည်း, ဥပမာ, ဘလော့ဂ်ကပြောပါတယ်ဤ application များလိုအပ်ရာခွင့်ပြုချက်တွေကိုကန့်သတ်ပါလိမ့်မယ်ဖုန်းရဲ့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးမှဝင်ရောက်ခွင့်ထင်စေခြင်းငှါ,; လျှောက်လွှာအတွက်ကြော်ငြာများကိုဖေါ်ပြဖို့အင်တာနက်ကိုရယူ; နှင့်ဖုန်းမပါဘဲနှင့်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကို turn off ဖို့လျှောက်လွှာများအတွက်သော့ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်မှဝင်ရောက်ခွင့်သော့ပွင့်သည်။ "သို့သော် Avast ဆက်လက်တစ်ဦးလက်နှိပ်ဓာတ်မီး App ကမေတ္တာရပ်ခံအာဏာပိုငျမြား၏အကွာအဝေး 25 (!) ပျမ်းမျှဖြစ်ပါတယ်။ "
အဆိုပါ blog post:: "ငါလက်နှိပ်ဓာတ်မီး applications များအားဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံတဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေကိုအချို့ကို 77 applications များအားဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံအသံမှတ်တမ်းတင်ခွင့်သကဲ့သို့, ရှင်းပြဖို့အလွန်ခက်ခဲဖြစ်ကြောင်းဆိုသညျကားသောအခါအကြှနျုပျယုံ; 180 ဖလက်ရှမီး applications များအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံကြောင်း, 21 applications များ၏တောင်းဆိုချက်အရမှာအဆက်အသွယ်စာရင်းကိုဖတ်ပါ, သို့မဟုတ်ပင်အဆက်အသွယ်ရေးပါ။ "
တစ်ခုလုံးကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ပါခံရကျိုးနပ်သည်နှင့် applications များ၏ downloads, သတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်ဖို့သတိပေးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် - သင်သေချာမသိကြသည့် application များနှင့် ပတ်သက်. လည်းအစ်အောက်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်, အထူးသဖြင့်။
ဤအချက်လည်းထင်ရှားစေခြင်းငှါ, Avast တစ်ဦးတည်းသာလျှောက်လွှာကြာအဖွဲ့သည်ဥပမာ, application တစ်ခုဇူလိုင်လ 15 2019 ၏ဖလက်ရှမီးကိုခေါ်။ အဆိုပါ application ကိုအသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးစွမ်းသည်။a"ကိုဖော်ရွေစစ်ဆင်ရေးများနှင့်လှပသောဒီဇိုင်းပုံစံ။ " အဖြစ် ဘလော့ဂ်, လျှောက်လွှာများအတွက် Play Store ကိုစာမျက်နှာ၏အဆိုအရ, လျှောက်လွှာအတူတူဖြည့်စွက်: "ဒီလက်နှိပ်ဓာတ်မီးလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး, အဘယ်သူမျှမမလိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်ရှိပါတယ် ။ တပ်ဆင်ရန်သာဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့အထုပ်နှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာအတောက်ပသည့် LED ဓာတ်မီးဖြစ်ခြင်း! "
သက်ပြင်းချ ။ အဆိုပါ Avast အဖွဲ့သည်အမှန်တကယ်လျှောက်လွှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်သင့်ကွန်ယက်၏အခြေအနေကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်စွမ်းအပါအဝင် 61 ခွင့်ပြုချက်စုစုပေါင်းမေတ္တာရပ်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Image ကိုရင်းမြစ်: ဓာတ်ပုံ Alastair Grant က / AP / Shutterstock
Prosus နှင့်အတူ, Naspers အဆိုပါအမ်စတာဒမ်စတော့အိတ်ချိန်းမှာအင်အားထွက်သည် - JeuneAfrique.com
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း: Jack Ma, အလီဘာဘာ၏သြဇာသူဌေး, လေး